मौद्रिक नीतिमार्फत समाज कल्याण : विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — बैंकिङ उद्योगको बजार संरचना कस्तो खालको हुने ? धेरै बैंक राख्ने राख्ने कि थोरै राख्ने ? कतिवटा राख्ने ? भन्ने समस्या विश्वभरी रहेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले बताएका छन् । उनले यो प्रश्न नेपालमा मात्रै सामना गरेको नभएर धेरै विकसित देशमा पनि यही प्रश्न रहेको बताएका छन् ।
७० देशको अर्थतन्त्रको तुलना गरिएको विश्व बैंकको अर्थशास्त्री थोर्सटन बेकको समूहले गरेको एउटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा बैंक कन्सन्ट्रेसनले बैंकिङ क्राइसिस घटाउँछ नै,' उनले भने, 'त्यसले बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र मुलुकमा प्रतिस्पर्धा गराउने वैधानिक संस्थाहरूको उपस्थितिले पनि बैंकिङ क्राइसिस घटाउँछ भन्ने उल्लेख छ ।'
प्रकाशित : असार ३१, २०७६ १०:३२
काठमाडौँ — निरन्तरकाे वर्षाका कारण ललितपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ठाउँठाउँमा गएको पहिरो हटाउन नसक्दा दक्षिण ललितपुरमा पर्ने तीन गाउँपालिकामा सडक अवरुद्ध भएर यातायात ठप्प भएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाभित्र कुनै मानवीय क्षति भएको छैन तर वडा नं ७ देवीचौरका १२ घरपरिवार पहिरोमा परी विस्थापित भएका छन् । देवीचौरका १२ घरपरिवारलाई त्यहाँ गएर खाद्यान्न वितरण गरिएको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए।
दक्षिण ललितपुरका वनपाखामा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरेका कारण यहाँ बढी क्षति भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । तीन दिनदेखि यातायात सडक अवरुद्ध भएका कारण टीकाभैरवदेखि तीनपाने भञ्ज्याङसम्म १३ किलोमिटरको सडक खुलाइएको वाग्मती गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले जानकारी दिए । लोप्चनले भने, 'यहाँ दुई जनाको मृत्यु भएको छ', सडक अवरुद्ध भएका कारण कति घर पहिरोमा परे भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मिलेको छैन ।'उक्त गाउँपालिका वारपार गर्ने मुख्य सडक कान्ति लोकपथ पूरै ठप्प भएको लोप्चनले जानकारी दिए। हेलिकप्टरबाट बिरामी काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको लोप्चनले बताउँदै भने, 'सामाजिक सञ्जाललगायत टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भइ ढुङ्गेयुगमा पुगेको महशुस भएको छ ।'
कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाको अवस्था अन्य सरह एकदमै नाजुक बनेको छ । यहाँ दुई जनाको मृत्यु भएको छ । तीन दिनदेखि अवरुद्ध भएको सडक खुलाउने प्रयास भइरहेकाे गाउँपालिका अध्यक्ष गोपीलाल सिङ्तानले जानकारी दिए ।
महाँकाल गाउँपालिकाभित्र पानी र पहिरोका कारण तीन जनाको ज्यान गएको छ । सो गाउँपलिकाभित्रको विद्युत् प्रवाहमा समस्या परेका कारण कोहीकसैसँग सम्पर्क गर्न सकिएको छैन । महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका प्रहरी उपरीक्षक रामकृष्ण सापकोटाका अनुसार दक्षिण ललितपुरका मानिस पैदलयात्रा गरी चापागाउँ बजार आउने क्रम दिनानुदिन बढेको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज जोशीका अनुसार गोदावरीमा १२ थान पाल, कम्बल, भाँडाकुँडा र म्याट वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी कोञ्ज्योसोममा ३० थान र महाँकाल अनि वाग्मतीमा २०–२० थान पाल, कम्बल, भाँडाकुँडा र म्याट वितरण गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:५५